Weekly Program | National Enlightenment Institute (NEI) | Page 5
3 essential Votes and 1 optional vote to candidates
မကြာတော့မယ့် ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ မဲပေး ကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မဲပေးရမယ့် နေရာမှာ ပြည်နယ် အတွက် တစ်မဲ ၊ အမျိုးသား အတွက် တစ်မဲနဲ့ ....
How political party are competed in three times of general election of Mon State
၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး နောက်ပိုင်း အဲဒီ ဥပဒေနဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့တာ ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဆိုရင် သုံးကြိမ်မြောက် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ၊ ....
Mon State has over 60000 people eligible to vote, but not yet hold citizenship card
မွန်ပြည်နယ်မှာ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးနိုင်သူပေါင်း (၁၇) သိန်းကျော် ရှိတဲ့ အနက်မှာ (၆) သောင်းကျော်ဟာ မှတ်ပုံတင် မရှိကြသေးတဲ့ လူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို မှတ်ပုံတင် မရှိသေးတဲ့ လူတွေကို ထောက်ခံချက်နဲ့ ....
Over 13000 oversea migrants have registered to vote for Mon State
ထိုင်းနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေကြတဲ့ ပြည်ပရောက် မွန်ပြည်နယ် ထဲက လူတွေကနေပြီး လာမယ့်၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲထည့်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ သံရုံးများ ကနေ တစ်ဆင့် မဲပေးဖို့ ....
Political parties must follow MOHS’s SOP for 2020 election campaign
ကူးစက်မြန် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံး ကြမယ့် နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန် ထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပြီး မဲဆွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ရုပ်သံ ....
10 person of On-Position and Ex Govt Ministers will compete on the upcoming election
လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးတွေ အပါအဝင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်က ဝန်ကြီးဟောင်း (၁၀) ဦး က လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် အရွေးကောက် ....
NMSP: Mon EAO allow election campaign in their control areas
လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေအနေနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ် နယ်မြေ ထဲက ကျေးရွာတွေကို မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် ရှိပြီး ဆက်ဆံရေး ရုံးကနေ တစ်ဆင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင် ....
302candidates of MonState individual and political parties will compete 45constituencies in election
လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် (၄၅) နေရာ အတွက် ပါတီပေါင်း (၁၇) ခုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၃၀၂) ဦးရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ပါတီ (၄) ခုကတော့ ....
Mon state will open more polling station for 2020 election
လာမယ့်၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မွန်ပြည်နယ်မှာ မဲပေးနိုင်သူပေါင်း (၁၇) သိန်း (၆) သောင်းကျော် ရှိတဲ့ အတွက် မဲရုံပေါင်း (၉၅၁) ဖွင့်လှစ်ထားရှိဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က စီစဉ် ထားပေမယ့် မဲစာရင်း ထပ်တိုး ....
NEI – Election Info Desk Weekly ProgramNEI – Election Info Desk Weekly Program-1
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အစီအစဉ် ================================= – လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ကြီးနှင့် ဝန်ကြီးဟောင်း ၁၀ ဦးအထိ ပါဝင် – နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှု အခြေအနေ – ....
© 2015-2021 National Enlightenment Institute, Myanmar. All rights reserved. Web Design by NetScriper